Vaovao - Glass miondrika mafana
Nosoratan'i ADMIN NOV. 24, 2020
Ny vera haingon-trano dia vokatra fitaratra ampiasaina manokana amin'ny haingon-trano, ny ankamaroan'izy ireo dia efa voadinika lalina, ao anatin'izany ny embossing, frosting, sary hosodoko, sns.
Fifaliana Glass fitaratra miolakolakadia ahodina ho lasa malefaka amin'ny alàlan'ny bobongolo sy fitaovana manokana, ary ampangatsiaka amin'ny rivotra mangatsiaka haingana sy mitovy. nyvera antonony mamorona setroka faneriterena mitovy amin'ny etona ambonin'ny tany, ary miforona ny fihenjanana am-pahefana anatiny, izay manatsara ny fitaratra amin'ny fomba mahomby. Ny vera dia in-efatra ny famolahana sy ny fanoherana ny fitaratra. Rehefa tapaka, ny fomba fanorotoroana dia mitovy amin'ny an'ny vera namboarina. Ireo vongan-tsoritany manana zoro mibontsina dia tsy manimba ny vatan'olombelona.
Noho izany dia antsoina koa hoe karazana vera fiarovana izy io. Ny fomba fanorotoroana dia mitovy amin'ny an'ny vera antonony. Ireo poti-kazo mahavariana amin'ny zoro dia tsy manimba ny vatan'olombelona, ​​noho izany, dia antsoina koa hoe karazana fitaratra azo antoka.
Safidy mety indrindra ho an'ireo mpanao mari-trano izay tsy maintsy mahafeno ireo kaody fananganana trano ary henjana sy hamafisina amin'ny fitakiana fiarovana. Ny kalitaon'ny fiantohana, ny fitaovana ampiasaina amin'ny kalitaon'ny famokarana dia tokony ho faritan'ny mpamatsy fitaratra sy mpividy fahita any Sina. Izy io dia misy amin'ny hatevin'ny haavo sy ny habe rehetra ananantsika, toy izany ny vera antonony ny vidiny dia manapa-kevitra amin'ny hateviny samihafa.
Glass veradia karazana vera voakorontana. Amin'ny alàlan'ny fomba fiasa ara-batana na simika, ny fihenan'ny famatrarana fanamiana dia miforona eo ambonin'ny fitaratra, ary misy fihenjanana am-pahefana ao anatiny. Ny fisian'ny fihenjanana vy toy izany no afaka mandamina tsara ny fiparitahan'ny microcrack amin'ny faritra fitaratra, ka ny vera antonony manana tanjaka mekanika avo, fitoniana hafanana tsara ary fahombiazan'ny fiarovana.
Glass fitaratra fifaliana dia fantatra ho iray amin'ireo mpanamboatra fitaratra matihanina indrindra ary mpamatsy ao Shina noho ireo vokatra avo lenta sy serivisy tena tsara. Ny tena vokatra dia misy vera antonony, vera voalamina, vera voaravaka, vera mangatsiaka, vera amin'ny masoandro, sns. Azafady matokia ianao fa hividy fitaratra avo lenta amin'ny vidiny mirary, mifandraisa aminay amin'ny andinin-teny farany sy ny antsipirian'ny vokatra.